के हो त ब्ल्याक फङ्गस(Black fungus)? - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsके हो त ब्ल्याक फङ्गस(Black fungus)?
May 25, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News 0
एकातिर देश कोभिड महामारीसँग लडिरहेको बेला, ब्ल्याक फङ्गस नामक एक घातक दुर्लभ रोगका मामिला देशमा देखापर्न थालेको छ। विशेष निको भइरहेका कोरोना विरामीहरूमा यस घातक दुर्लभ सङ्क्रमण देखिएपछि भारतको केही राज्यहरूले ब्ल्याक फङ्गसलाई महामारी घोषणा गरिसकेको छ।
म्युकोरमाइकोसिस नामक यस फङ्गल रोगको मृत्यु दर पचास प्रतिसतभन्दा छ। यसले पहिले नाकमाथि धावा बोल्छ अनि बिस्तारै दिमागतिर फैलिएर जान्छ। कृतिम मामिलाहरूमा सर्जरीद्वारा आँखा निकालिएपछि अथवा खोपडीको अंश अनि गिजा निकालिएपछि मात्र यसको उपचार हुने बताइएको छ।
सामान्यत, यो एक दुर्लभ रोग हो। तर अहिलेसम्म भारतमा यसका ७५०० भन्दा अधिक मामिला देखा परिसकेका छन् अनि २५० भन्दा धेर मानिसहरूले यसको कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्।
ब्ल्याक फङ्गसको सङ्क्रमण धेरैजसो कोरोना सङ्क्रमितहरूमा देखिएको छ। कोरोनाको उपचारको लागि स्टेरोइडको अधिक प्रयोगलाई ब्ल्याक फङ्गस सङ्क्रमणको कारण बताइएको छ। स्टेरोइडको अधिक प्रयोगले शरिरको प्रतिरोधी क्षमतामाथि सिधा हस्तक्षेप गर्छ। भारतमा मधुमेह रोगीहरूको संख्यालाई पनि ब्ल्याक फङ्गसको एक कारण बताइँदैछ। भारत मधुमेह रोगीहरूको संख्यामा विश्वको दोस्रो नम्बरमा आउँछ।
ब्ल्याक फङ्गस रोग जैविक पदार्थहरूमा पाइने फङ्गलका बीज(Fungal spores)को कारण हुने बताइएको छ जो हावाको माध्यमबाट मानव शरिरभित्र प्रवेस गर्छ। त्यसपछि यिनीहरू नाक अनि आँखामा प्रवेस गरेपछि सामान्य रूपमा यी अङ्गहरूमा कालो दाग देखापर्न शुरू गर्छ। असल प्रतिरोधी क्षमता भएका रोगीहरू सजिलैसँग यसविरूद्ध लड्न सक्छन् तर प्रतिरोधी क्षमता धेर नभएका रोगीहरूको लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ।
अहिलेसम्म पाँच राज्य, तामिल नाडु, ओडिसा, गुजरात, राजस्थान अनि तेलङ्गनाले यसलाई महामारी घोषणा गरिसकेको छ। अन्य राज्यहरूबाट पनि चाँडै घोषणा आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। यस रोगलाई पत्तो लगाउन अनि उपचार गर्न आइसिएमआरले परामर्श समेत जारी गरेको छ।
केही दिन अगाडि मात्र सिलिगुडीको एक महिलामा ब्ल्याक फङ्गसको सङ्क्रमण पाइएपछि हिजमात्र उनको सफल अपरेशन भएको खबर प्राप्त भएको छ।
ब्ल्याक फङ्गस सरूवा(contagious) रोग हो त?
होइन। ब्ल्याक फङ्गस सरूवा रोग होइन अर्थात यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा प्रवेस गर्दैन। एम्सका निर्देषक डा. रन्दिप गुलेरियाले यसको पुष्टि गरेका छन्।
कसलाई ब्ल्याक फङ्गसबाट सङ्क्रमित हुने धेर सम्भावना छ?
कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई ब्ल्याक फङ्गसबाट सङ्क्रमित हुने धेर सम्भावना रहेको बताइएको छ। मधुमेह रोगीहरूलाई पनि यसबाट खतरा छ। शरिरको प्रतिरोधी क्षमता असल नहुनेहरू यसबाट जोगिन आवश्यक छ।
ब्ल्याक फङ्गस रोगका शुरूवाती लक्षणहरू के के हुन्?
नाक बन्द हुने, नाकबाट रगत बग्ने, नाकबाट पानी निस्कने यसका शुरूवाती लक्षणहरू हुन्। सङ्क्रमण नाकदेखि आँखातिर सरेर जाँदा नाक अनि आँखाको छेउछाउ कालो-कालो दाग देखिनसक्छ। आँखाको रानी ठिकसँग नचल्नु, आँखा दुख्नु, आँखा रातो हुनलाई समेत यसको लक्षण मानिन्छ। सङ्क्रमण दिमागसम्म पुगेपछि टाउको दुख्नु, निद्रा लाग्नु, थकान महसुस हुनु, रक्तनली ब्लक हुनु, स्ट्रोक, हेमोरेज आदि यसका कारण हुनसक्छन्।
यसको उपचार कसरी हुन्छ?
सङ्क्रमण शुरू हुनेबित्तिकै थाहा लागे औषधीले निको हुनसक्छ। एन्टीफङ्गल औषधी, शरिरमा सुगर लेभललाई सन्तुलनमा राखेर स्टेरोइडको प्रयोग पनि गरिन्छ। सङ्क्रमण पत्तो लाग्नमा ढिलाई भए सर्जरी नै एकमात्र उपाय हो।
के ब्ल्याक फङ्गस घातक रोग हो?
ब्ल्याक फङ्गस घातक रोग हो। समयमा रोगीले उपचार नपाए खतरनाक सिद्ध हुनसक्छ। यसको मृत्यु दर पचार प्रतिसतदेखि नब्बे प्रतिसतसम्म रहेको बताइएको छ।
ब्ल्याक फङ्गस रोकथामका उपाय के के हुन्?
शरिर अनि वातावरणको सफाई पहिलो कुरा हो। आयोडिनले नियमित कुल्ला, घरबाट अनावश्यक बाहिन ननिस्कने, नियमित व्यायाम, स्टेरोइडको कम प्रयोग, मधुमेहको सन्तुलन, मास्कको प्रयोग आदिमा ध्यान राखेर यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ।